Mavericks ee Shaqada: Yaa Shaqaalaynaya? | Martech Zone
Isniin, Disembar 18, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Bishii la soo dhaafay Naadiga Buugga Suuq geynta Indianapolis waxay u doorteen Mavericks at Work inuu noqdo buugga si loo akhriyo. Waan jeclahay buugaagta, gaar ahaanna waxaan jeclahay buugaagta ganacsiga. Gurigaygu waa buuxaa. Waan aqrinayaa tan oo hada waan bilaabay Marnaba Kaligaa Ha Cunin: Iyo Sirta Kale Ee Guusha, Hal Xidhiidh Markasta.
Mavericks at Work waa mid ka mid ah buugaagta cajiibka ah ee dhiirrigelinta leh, laakiin ma hubo in aan helayo 'buuxis' iyo in kale. Tom Peters, Guy Kawasaki, Seth Godin, iyo xitaa asxaabteyda iyo qoyskeygu waxay ii sheegaan inaan noqdo Maverick.
Anigu waxaan ahay Maverick qalbigayga, laakiin kuma qanacsana inay adduunyadu u baahan tahay maverick aad u tiro badan. Ma yeelnaa
Maverick: qof kali ku kala aragti duwan, sida indheer garad, farshaxan, ama siyaasi, kaasoo qaata mowqif madaxbanaan marka laga reebo asxaabtiisa.
Si kastaba ha noqotee, miyaanay u baahnayn rag si fudud u hagaajinaya baabuurtayada, u xaaqaysa sagxadaha, basaska u sii wadaya, una ilaalinaya dukaanka? Ganacsi kastaa miyuu awoodi karaa inuu sii wado dhiirrigelinta Mavericks? Maaha inaan shaki iiga jiro riyadeyda ganacsi, kaliya waxaan shaki iiga jiraa inay jiraan fursado badan oo Mavericks ah.
Saaxiibkey wanaagsan ayaa i weydiiyay sida aan u jeclahay buugga. Waxaan ugu jawaabay, "Waan jeclahay buugga!"
Kadibna waxay noqotay inaan dib ugu noqdo shaqadaydii. Maaha in shaqadayda aysan ii oggoleyn inaan saameyn ku yeesho… waa iska fudud tahay ganacsiga guud ahaan qasab maahan inuu qadariyo maverick-ka shaqada. Iyagu waa kuwa aan ku habbooneyn diinta, shisheeyaha, qas wadayaasha. Badanaa, waxaan u maleynayaa inay tahay Maverick-ka oo ku eg raadinta fursadda xigta - maxaa yeelay marna maahan meeshii ay ka tageen.
Miyaan ku khaldanahay tan?
Sawirada Taariikhda Jirka si Fudud Loo Sameeyay
18, 2006 at 2: 29 PM
Waxaan u maleynayaa inay dadku qaadan karaan mowqif madax-bannaan wax kasta oo ay sameeyaan .. xitaa keydinta adeegayaasha iyo makaanikada baabuurta. Uma maleynayo inaan haysan karno dad aad u tiro badan oo joojiya wax qabadka sababtoo ah "waa sida ay yihiin" oo taa badalkeed su'aalo weydiiya, go'aansada inaan ka hor tagno badarka, sidaas darteedna, waxaan hagaajineynaa adduunka inagu xeeran.
Jan 26, 2007 saacadu markay ahayd 10:14 PM
Waan ku raacsanahay, tani waa sababta aan u haysanno Jessie James oo dhisto mootooyin, Orange County Choppers, dhisa mootooyin. Dhammaan dadka qandaraaska qandaraaska qaadan doona iyagaa u shaqeeya. Miyaad u maleyneysaa in dadkaas oo dhami ay yihiin kuwa isku dheelitiran, nolosha ugu ciyaar si ammaan ah. kuwani waa tusaale. Anigu waxaan ahay dad aan islahayn. Waxaan ahay american dumar ah oo cadaan ah oo tagtay iskuulka acupuncture. waxay ahayd 3 sano oo dheer. Aniguna kama ihi Aasiyaan wanaagsan. Waxaan dhihi lahaa taasi waa unformformform. Runtii waxaan ubaahanahay dad badan oo aan isku mid ahayn
18, 2006 at 8: 28 PM
Ma diidani oo si khaldan ha iila qaadin, midkoodna daruuri ma ahan inuu ka qiimo badan yahay kan kale. Waxaan aaminsanahay in koox weyn ay u baahan tahay 'wiishyahanno iyo riixyaal'. Kuwa u maleynaya iyo kuwa fulin kara qorshahaas.
Kaliya waxaan la yaabanahay imisa mavericks ah oo warshadu wax ka qaban karto iyo haddii runtii ay jiraan wax yar oo iyaga ka mid ah!
18, 2006 at 10: 30 PM
Tani sidoo kale waan ka fikiri jiray, laakiin waxaan xaqiiqsaday - qof kastaa wuxuu noqon karaa Maverick mararka qaarkood, iyo 'kor u qaad iyo riix' mararka kale (xitaa haddii ay u baahan tahay qaniinyada carrabkooda). Fiicnaan mayso haddii qof kastaa soo jeediyo in wax walba loo sameeyo hab cusub mar kasta. Laakiin waxaan u maleynayaa inay jirto meel qof walba uu ku weydiin karo su'aalaha u baahan weydiinta, gaar ahaan "waayo?". Khibradeyda, su'aashan waxaa la weydiyaa si aad u yar.
21, 2006 at 10: 47 AM
Waan ku raacsanahay. Waa inaan helno dad riixa fikradaha cusub oo ku riyooda maxaa noqon kara. Sida ugu muhimsan, waxaan ubaahanahay dadka diirada saari kara sameynta waxa lagama maarmaanka u ah in jihada cusub horey loogu sii wado.
Labadaba waqti iyo meel baa jira. Fadhiiddu waxay dhacdaa marka aan fikrado cusub la soo bandhigin. Si kastaba ha noqotee, fadhiidku wuxuu kaloo dhici karaa marka fikrado aad u tiro badan lagu dhex tuuro iskudhafka oo qofna diyaar uma aha inuu la shaqeeyo fikradaha qof kale.